Homeसमाचारआज पनि बढ्यो डलरको मूल्य, हे’र्नुहोस कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ?
June 2, 2021 admin समाचार 3549
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबा’रका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तो’केको छ । तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलरको मूल्य मंगलबारको भन्दा बढेको छ । मंगल’बार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११५ रूपैयाँ ८८ पैसा रहेकोमा आज बढेर ११६ रूपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ । यसको बि’क्रीदर ११६ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ ।
बेलायती पा’उण्ड एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरि’ददर १४२ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्री’दर १४३ रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको छ ।कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाए’को छ । कुन देशको मुद्राको दर कति ?
यो पनि, सर्लाही, १९ जेठ – जिल्ला:का व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्न’को मूल्य वृद्धि गराएका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको मौका छोपी जिल्लाका व्यापा’रीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले कोभिड–१९ को सङ्क्र’मण नियन्त्रण गरी सामुदायिकस्तरमा फैलिन नदिन जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै जिल्लाका व्यापारी’हरुले आफूखुसी खाद्यान्नसहित अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।
कोरोना भाइर’सबाट सङ्क्र’मित हुने चिन्ताले सताइरहेको बेला एकाएक सबैखाले उपभोग्य सामग्रीको बजार भाउ बढेपछि सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् । दिनभरको कमाइले साँझ बिहान हा’तमुख जोड्ने सर्वसाधारण कृत्रिम मूल्य वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेको स्थानीय जानकार उमासिंह साहले बताउ:नुभयो । ओएस नेपालबाट
रबी लामीछाने र टिम मा’र्फत यति धेरै विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ सामाग्री वितरण ! सबैमा उच्च सम्मान!
March 29, 2021 admin समाचार 3494
कोरोना लागेको काकालाई, भतिजले राप्ती नदीमा फ्या’केको भिडियो भाइरल – हे’र्नुहोस्
May 31, 2021 admin समाचार 4866
महामारीको समयमा विश्वास नलाग्ने घ’टना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अहिले सामाजिक सजालमा एउटा भिडियो निकै भाइर’ल भएको छ । महामारीमा ज्या ‘न गु मा एकाहरुलाई स्वा
August 23, 2021 admin समाचार 3562
गाउँमा एकजना भलाद्मी मानि`सकाे नि धन भएछ । उसका छाेरा`हरू र छर`छिमेक मिली ला स जलाउन लैजाने तया`री भइ`रहेको समयमा एक अपरिचित व्यक्ति आउँछ र ला स को पाउ समात्दै भन्न लाग्छ “म र्ने मानिसले
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220367)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220127)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215040)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (213692)